Daloolka Plasma - Delta Engineering Belgium
Kariifka qaybta "daahan Plasma"
Arbacada, 17 Oktoobar 2018 by Injineer Delta
Weelka weelasha plasma
Dharka plasma-kaani wuxuu xiran karaa weel caag ah 5L ilaa 30L. Waxay abuurtaa caqabad dhanka gudaha ah ee gudaha PET (135-260 BPH) iyo HDPE (90-130 BPH) weelasha. Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka wax soo saaraya
Published in Daahan Plasma
Khamiis, 28 May 2020 by Sara
Dharka Plasma ee durbaanada L-ring
Coater-kan plasma wuxuu ku dabooli karaa durbaanno L-ring caag ah ca. 50L ilaa 250L. Waxay ku abuurtaa caqabad gudaha PET (50-110 BPH) iyo durbaanka HDPE (35-55 BPH). Daahan si buuxda dib loo warshadeyn karo Mashiinka keydinta hal.
Plasma-coater oo loogu talagalay weelasha weelasha
Dharkan-plasma-Coater-ka ayaa xariiri kara weelasha caagga ah 5L illaa 30L. Waxay abuurtaa caqabad dhanka gudaha ah ee gudaha PET (270-520 BPH) iyo HDPE (180-260 BPH) weelasha. Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka mataanaha dhaliya.
Arbacada, 02 Oktoobar 2019 by Cristina Maria Sunea
Dharka Plasma ee dhalada
Dharka noocan ah ee plasma-ka ayaa xiran kara dhalada caagga ah laga bilaabo 0.1L illaa 2L. Waxay abuurtaa caqabad ku ah gudaha gudaha dhalada PET (750-1400 BPH) iyo dhalada HDPE (500-700 BPH). Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka dareeraha Quadruple.
Koofiyaddan plasma-ga ah waxay gashan kartaa weelasha caagga ah laga bilaabo 3L illaa 15L. Waxay abuurtaa caqabad dhanka gudaha ah ee gudaha PET (600-1100 BPH) iyo HDPE (400-550 BPH) weelasha. Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka dareeraha Quadruple.
Dharka Plasma ee weelasha
Koofiyaddan plasma-ga ah waxay gashan kartaa weelasha caagga ah laga bilaabo 3L illaa 15L. Waxay abuurtaa caqabad dhanka gudaha ah ee gudaha PET (1050-1600 BPH) iyo HDPE (700-800 BPH) weelasha. Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka Qalabka-sameeyaha.
Dharka dhalada plasma ee dhalada ah
Dharka noocan ah ee plasma-ka ayaa xiran kara dhalada caagga ah laga bilaabo 0.1L illaa 2L. Waxay abuurtaa caqabad xagga dhalada gudaha ah PET (1500-2800 BPH) iyo dhalada HDPE (1000-1400 BPH). Dharka si buuxda dib-loo-sheegi karo Mashiinka Octa-reactor.
Talaado, 28 Luulyo 2020 by Sara
Qeybta nadiifinta Xiinka
Qeybtan nadiifinta ee Xiinka kulul waxay nadiifisaa dhigaalka kaarboonka ee ku tiirsan dhalada ku tiirsan dhalada plasma-da. Ka fogow wasakheynta sheyga!
Mugga taangiga: 120L.
Isniin, 25 Janawari 2021 by Sara
Mugga taangiga: 240L.